Mahomby ve ny vaksiny COVID-19 novokarin’i Torkia · Global Voices teny Malagasy
Nanomboka namokatra ny vaksininy manokana i Torkia tamin’ny volana Novambra 2020
Voadika ny 23 Janoary 2022 4:59 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, عربي, Ελληνικά, Español, українська, English
Pikantsary avy amin'ny ampahan-dahatsarim-baovao DW.
Nanatevin-daharana ny lisitry ny firenena namokatra ny vaksininy manokana hiadiana amin'ny COVID-19 i Torkia tamin'ny volana Novambra 2020. Tamin'ny volana Desambra 2021, nankatoavin’ny filoha Recep Tayyip Erdoğan ny Turkovac ho ampiasana amin’ny vaksiny fatra fanamafisana vonjimaika. Na izany aza, rehefa nanomboka namoaka fatra ireo matihanina ara-pitsaboana, raha tsy misy ny angondrakitra azo jerena ampahibemaso avy amin'ny andrana dingana faha 3 dia mbola misalasala ny manam-pahaizana sasany, milaza fa aloha loatra ny hanehoan-kevitra momba ny fahombiazany.
Mandritra izany fotoana izany, niakatra be tao amin'ny firenena ny isan'ny tranga vaovao amin'ireo marary voan'ny aretina tato anatin'ny herinandro vitsivitsy noho ny karazany vaovao Omicron, nahatratra 65.000 hatramin'ny 11 Janoary lasa teo. Hatreto, efa olona miisa 130 tapitrisa mahery no vita vaksiny tao amin’ny firenena ho an'ny fatra voalohany, faharoa ary fahatelo araka ny antontanisa ofisialy. Manodidina ny 80 isanjaton'ny mponina ao amin'ny firenena no nahazo ny fatram-baksiny miisa roa farafahakeliny. Manantena ny governemanta fa hanampy hampitombo ny fahatokisana ny fanaovam-baksiny [mg] ity vaksiny ao amin’ny firenena ity ary handrisika olona maro kokoa hanao vaksiny.
Novokarin’ny Oniversiten'i Erciyes, ny Minisiteran'ny Fahasalamana, ary ny Fiadidian'ny Ivontoeran'ny prezidansa misahana ny fahasalamana Tiorka ny vaksiny nasionaly, Turkovac. Nanomboka tamin'ny volana Novambra 2020 ny dingana voalohany tamin'ny andrana. Mpilatsaka an-tsitrapo miisa 44 no nanolo-tena hanaovana ny andrana tamin'izay fotoana izay. Natao tamin'ny volana Febroary 2021 sy volana Jona 2021 ny dingana faha 2 sy faha 3. Nanome anarana vaovao hoe Turkovac ny filoha Erdoğan tamin'ny volana Jona 2021 raha nantsoina hoe ERUCOV-VAC izany tany am-boalohany. Ny vaksiny Sinovac sy Pfizer-BioNTech no nampiasain’i Torkia talohan'ny nahavitan'ny vaksiny nasionaly. Araka ny Bloomberg, “Mampiasa viriosy tsy miasa ny Turkovac mba hanamafisana ny hery fiarovana, fa tsy ny teknolojia RNA izay fototry ny fanefitra ampiasain’ny Pfizer-BioNTech SE sy ny Moderna Inc.“
Saingy mampanontany ny famoahana azy haingana, anisan'izany ny maha-mendri-pitokisana azy.
Namoaka fanambarana ny vondrona miasa amin’ny COVID ao amin'ny Fikambanan’ny Mpitsabo Tiorka milaza fa: “Vao mainka indrisy fa hampitombo ny fisalasalana amin’ny fanaovam-baksiny ny fanambarana nataon’ny minisitera amin’ny fiheverana ny vaksiny ho azo antoka sy mahomby kanefa tsy misy ny vokatra ny fanadihadiana ara-tsiantifika navoaka sy ny adihevitra eo amin'ny tontolo ara-tsiansa.” Nilaza ihany koa ny fikambanana fa na dia afaka manampy amin'ny fifehezana ny valan’aretina maneran-tany sy ao an-toerana aza ny vaksiny, dia tokony amin’ny hamehana ihany no ampiasana izany mandra-pahavitan'ny fanombanana matotra ary havoaka ampahibemaso ny valiny. Nanentana ny Minisiteran'ny Fahasalamana mba hizara ny valin'ny andrana amin'ny vahoaka mba hisorohana ny fitomboan'ny fisalasalana amin’ny fanaovam-baksiny ny vondrona.
Nandrisika ny manampahefana hizara angondrakitra manokana momba ny andrana dingana faha-3 i Şebnem Korur Fincancı, filohan'ny Fikambanan’ny Mpitsabo Tiorka, tamin'ny antsafa niarahana tamin'ny tranokalam-baovao Diken. “Azontsika amin’izay ny fomba nahazoan'ny vaksiny fankatoavana vonjimaika. Satria toa tsy mety amin'ny fampiasana vonjimaika ny vaksiny araka ny angon-drakitra ananantsika amin'izao fotoana izao.”
Nampidirin’ny tranokalan'ny Fikambanana misahana ny Fahasalamana (OMS) an'ny Firenena Mikambana ao anaty lisitry amin'ny andrana dingana faharoa ny vaksiny nasionaly. Nilaza ny manampahefana fa miandry valiny avy amin'ny OMS izy ireo alohan'ny handefasany antontan-taratasy fanampiny momba ny fangatahan'ny OMS.
Nanaraka ny fanambaran'i Fincancı ny fanomezan-toky avy amin'ny Profesora Ateş Kara, talen'ny Ivontoeram-baksiny Tiorka sady mpikambana ao amin'ny birao siantifikan'ny Ministeran'ny Fahasalamana misahana ny COVID-19, izay nilaza tamin'ny masoivohom-baovaom-panjakana teo aloha fa, “misy ny fitomboana haingana tamin'ny hery fiarovana [avy amin’ny vaksiny nasionaly] tamin'ny fanadihadiana izay nampiasana ny Turkovac ho toy ny vaksiny fanamafisana.”
Tsy manaiky izany i Mehmet Ceyhan, mpikambana ao amin'ny Oniversite Hacettepe. Tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny gazety Sozcu, nilaza i Ceyhan fa tsy misy dikany ny fanatsoahan-kevitra mifototra amin'ny hery fiarovana ary raha tsy misy ny angondrakitra momba ny andrana dingana faha-3. “Tandindomin-doza ny fahasalaman'ny olombelona eto. Raha tsy misy angondrakitra ampy dia tsy afaka milaza aho hoe ‘ampiasao ity vaksiny ity na ito no ampiasao fa tsy ito.’ Mila hitako aloha ny vokatry ny andrana amin'ny dingana faha-3, sy ilay antsoina hoe fitomboana haingana tamin’ny hery fiarovana’ alohan'ny hanaovana fanombanana.”
Nanao vaksiny fanamafisana Turkovac mivantana nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny 29 Desambra 2021, niaraka tamin'ireo mpikambana hafa ao amin'ny birao siantifikan'ny Ministeran'ny Fahasalamana ny Minisitry ny Fahasalamana, Fahrettin Koca na eo aza ny fanakianana.
Miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny komity siantifika, mandray ny vaksiny Turkovac izahay ho fanamafisana.
Nandritra izany, taorian'ny fivorian'ny birao siantifikan’ny Ministeran'ny Fahasalamana misahana ny COVID-19 tamin'ny 5 Janoary lasa teo, nahenan’ny minisiteran'ny fahasalamana ho 7 andro ny fe-potoana fitokana-monina ho an'ireo marary voan'ny viriosy. 10 andro ny fe-potoana fitokana-monina teo aloha saingy nampitomboina ho 14 andro izany noho ny fiakaran'ny karazany Delta. Tafiditra ao anatin'izany fepetra izany ihany koa ny fanarahana ny fitsipiky ny fanajana elanelana, ny fanaovana arovava-orona, ny tsy fijanonana maharitra ao anaty trano mihiboka, ary ny fiantsoana ny olom-pirenena hanao vaksiny fanamafisana. Tsy nisy ny fepetra fanampiny nambara.